बच्चाले सिक्का वा गुच्चा निलेमा के गर्ने ? अभिभावकहरुले अवश्य पढ्नुहोला…. - लुम्बिनी समाचार
बच्चाले सिक्का वा गुच्चा निलेमा के गर्ने ? अभिभावकहरुले अवश्य पढ्नुहोला….
उत्सुक र चकचके स्वभाव बच्चाहरूको गुण नै हो । सिक्का, गुच्चा, साना ब्याट्री लगायत अन्य धारिलो बस्तु उनीहरूले मुखमा हाल्छन् । गुच्चा निलेमा गोलो प्रकृतिको हुने भएकाले पेट, आन्द्रा हुदै दिसाबाट बाहिर निस्किन्छ । खानेनलीमा सिक्का अड्कियो भने तुरुन्त निकाल्नुपर्छ ।
पेटको भागमा बसिरहेको छ, अरु लक्षण देखाएको छैन भने ४ हप्ता कुर्न सकिन्छ । तर सिक्काको आकार ठूलो भएमा वा अन्य तिखो÷धारितो बस्तु भएमा तुरुन्त निकाल्नुपर्ने हुन्छ । तर सिक्का आन्द्रामा पुगिसकेको भए जोखिम कम हुँदै जान्छ ।
सबैभन्दा खतरा भनेको बालबालिकाले ब्याट्रीहरू निल्नु हो । खेलौना र टिभीको रिमोटमा हुने साना ब्याट्री निलेमा त्यसमा भएको केमिकल बाहिर आउछ । त्यसले खानेनली फुटाउने र वरपरका अन्य अंगमा पनि असर गर्ने हुनसक्छ ।
ब्याट्री निलेमा सकेसम्म ४ घण्टाभित्र निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ । कहिलेकाही बालबालिकाले एसिड निल्न सक्छ । त्यसको सामान्य असरस्वरुप बान्ता हुनसक्छ ।
तर अन्य असर नदेखिने भएकाले अभिभावकहरूले निको भएको ठानेर उपचार गर्दैनन् । एसिडले कालान्तरमा पनि असर देखिने भएकाले बच्चालाई ढिलो नगरी अस्पताल पु¥याउनुपर्छ ।
अनेरास्ववियुद्धारा हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न
रोम प्रो अडियो नेपोलियन क्रिउ र नाट्यशोरी कला केन्द्र द्वारा नेपाल अपांग आश्रम बुटवललाई सहयोग
द युथ युनिटी फेसबुक ग्रुप द्वारा टोपी दिवस मनाईयो
हिन्दुहरुका साक्षात भगवान श्री स्वस्थानी श्री स्वस्थानी व्रत आजदेखि सुरु, यस्तो छ महिमा…….
रोट्र्याक क्लब अफ तिनाउ सिटीको पहलमा स्वास्थ्य शिविर एवम विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न
२०७५ सालका मुख्य चाडपर्व कहिले पर्नेछन् ? हेर्नुहोस